Ukuqala iphrojekthi ngeGit neGoogle Code (Ingxenye II) | Kusuka kuLinux
Ukuqala iphrojekthi ngeGit neGoogle Code (Ingxenye II)
Njengoba kuthenjisiwe kuyisikweletu, lapha sizolandela izinyathelo ezidingekayo zokwenza iphrojekthi ku I-Google Code.
1 1. Singena kuGoogle
2 2. Sakha iPhrojekthi
3 3. Ukuthola idatha yokugcina ku-Google Code
1. Singena kuGoogle
Into yokuqala okufanele siyenze ukungena ku-akhawunti yethu -Google, singena kusayithi le- I-Google Code ekhoneni eliphezulu kwesokudla sizothola ukufinyelela kokungena ngemvume. Ngakwesobunxele singashintsha ulimi.
2. Sakha iPhrojekthi
Uma ungene ngemvume kusayithi nge-akhawunti yethu, singakuqinisekisa lokhu ngoba ekhoneni eliphezulu kwesokudla sizobona ikheli lethu le-imeyili -Google, futhi singachofoza kusixhumanisi esithi Dala iphrojekthi entsha. Lokhu kuzosiqondisa ekhasini lokuqedela imininingwane yephrojekthi yethu.
Sigcwalisa imininingwane yephrojekthi yethu futhi uma sesiqedile sizocindezela inkinobho Dala Iphrojekthi.
Manje njengoba sesidale iphrojekthi yethu, isisikhombisa ikhasi layo eliyinhloko. Okwamanje ngeke senze okuningi ngoku I-Google Code. Kusele kithina kuphela ukuthola imininingwane ukuze sikwazi ukuxhuma ngokuhamba kwesikhathi kude futhi silayishe amafayela I-Git.
3. Ukuthola idatha yokugcina ku-Google Code
Ngalokho-ke kufanele siye esigabeni Umthombo (ikhodi yomthombo) futhi lapho izosinika izinketho ezi-2 zokuxhuma.
La Inketho ye-1 uzosicela iphasiwedi googlecode.com ngaso sonke isikhathi lapho sifuna ukwenza okuthile Phusha, into ekugcineni eyisicefe. Ikakhulukazi njengoba le phasiwedi ingenye eyenziwe ngokuzenzekelayo ngephrojekthi, akuyona iphasiwedi yethu ye-akhawunti yethu. Kungakho ngincoma ukusebenzisa i Inketho ye-2.
Sizosebenzisa Inketho 2, sichofoza kusixhumanisi esithi iphasiwedi ye-googlecode.com. Lokhu kuzosikhombisa ikhasi elisha futhi ukusuka lapho sizokopisha umugqa wokugcina wesigaba sokuqala. Esikubonayo kugqanyiswe esithombeni esilandelayo.
Ungakhathazeki, le phasiwedi oyibonayo sengivele ngiyivuselele futhi ayisebenzi ngalutho olunye 😉
Sakha ifayela kufayela le- IKHAYA yomsebenzisi wethu obizwa .netrc futhi ngaphakathi sibeka okuqukethwe esisanda kukukopisha kusuka ekhasini. Esimweni esinjalo:
Kuze kube manje sisungule iphrojekthi ku- I-Google Code futhi sililungisile ifayela thina «izoxhuma»Ngekhosombe lethu elikude uma sesisungule indawo yethu yendawo I-Git.
Engxenyeni elandelayo sizobona ukuthi singayakha kanjani iphrojekthi emshinini wethu futhi silungiselele I-Git yokulawula inguqulo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ukuqala iphrojekthi ngeGit neGoogle Code (Ingxenye II)
I-Yakuake ihlala njalo kusikrini esigcwele (Imodi Yesikrini Esigcwele)
Ideskithophu Engcono Kakhulu ye-Linuxero: Disemba 2013 - Imiphumela